यिनै हुन् दादागिरी देखाउदै नेपाल प्रहरीको ला’ठि खोसेर आ’क्रमण गर्ने चिनियाँ नागरिक, प्रहरीले मुद्दा चलायो ! – Online Nepal
यिनै हुन् दादागिरी देखाउदै नेपाल प्रहरीको ला’ठि खोसेर आ’क्रमण गर्ने चिनियाँ नागरिक, प्रहरीले मुद्दा चलायो !
May 9, 2020 335
सिंहदरबार अगाडि लकडाउन र निषेधित क्षेत्र तोड्दै प्रहरीमाथि नै हा’तपा’त गर्ने चार चिनियाँ नागरिकलाई अ’भद्र व्य’वहारमा मुद्दा चलाइने भएको छ । महानगरीय प्रहरी परिसरका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक श्यामलाल ज्ञवालीले उनीहरुलाई आइतबार अ’भद्र व्य’वहार मुद्दामा म्याद थप गरी अनुसन्धान गरिने जानकारी दिनुभयो । शुक्रबार अपराह्न बन्दाबन्दीका समयमा निषेधित क्षेत्रको उल्लङ्घन गरी प्रहरीमाथि आ’क्रमण गरेपछि उनीहरुलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो ।
परिसरका अनुसार गाभिड र लियो लाओलाई महानगरीय प्रहरी वृत्त दरबारमार्ग र ज्याङ जङ तथा गेगा न्यानीलाई सिंहदरबारस्थित वृत्तमा राखिएको छ । पक्राउ परेका अन्यलाई भने छाडिएको छ । उनीहरु घर जान पाउनुपर्ने माग राख्दै ‘वी वान्ट टु गो ब्याक होम’ लेखेको प्लेकार्ड बोकेर निषेधित क्षेत्र तोडी सिंहदरबारतर्फ आएका थिए । उनीहरूले प्रहरीको ला’ठी खोसेर प्रहरीलाई नै हि’र्काएका थिए । त्यसको जवाफमा प्रहरीले पनि उनीहरूमाथि ला’ठी हा’नेको थियो ।
सोही क्रममा प्रहरी नायब उपरीक्षक हरिबहादुर बस्नेतसहित पाँच प्रहरी र छ चिनियाँ घाइते भएका थिए । पर्यटन राहदानीमा घुम्न आएका ती चिनियाँ ठमेलबाट रानीपोखरी, रत्नपार्क हुँदै सिंहदरबारतर्फको निषेधित क्षेत्रतर्फ आएका जनाइएको छ ।त्यस्तै चिनियाँ नागरिक र प्रहरीबिच झ’डप भएको घटनाबारे आफू जानकार रहेको नेपाल स्थित चिनियाँ दूतावासले जनाएको छ । नेपाल प्रहरीसँग सम्पर्कमा रहेर छलफल गरिरहेको नेपालस्थित चिनियाँ दूतावासले शुक्रबार राति विज्ञप्ति जारी गरेर जानकारी दिएको छ ।प्रहरीमाथि आ’क्रमणमा उत्रिएका चार चिनियाँ नागरिकमाथि मुद्दा चलाउने तयारी भएपछि दूतावासले राति विज्ञप्ति जारी गरे घटनाबारे जानकार रहेको उल्लेख गरेको हो ।
नेपालमा रहेका चिनियाँहरुले यहाँको कानूनको पालना गर्नु पर्ने पक्षमा आफूहरु रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । चीनले नेपालमा रहेका दुई सय भन्दा बढी आफ्ना नागरिकलाई बिहीबार स्वदेश लगेको थियो । तर जान नपाएकाहरुले चिनियाँ दूतावास र सिंहदरबार अगाडि प्रदर्शन गरेका हुन् ।दूतावासले घटनाबारे जानकार रहेको बताए पनि पक्राउ परेका चिनियाँ नागरिकबारे के गरिने छ भन्ने स्पष्ट पारेको छैन ।
Prevहिजो प्रहरीलाई नै आ’क्रमण गर्ने यी चिनियाँ नागरिकले नेपालमा गर्थे यस्तो काम !
Nextकोरोनाले धेरैको ज्यान गएपछि ट्रम्पले हिन्दु पूजारी बोलाएर ह्वाइट हाउसमा ‘शान्ति पाठ’गराए (भिडियोसहित)
टेकुले कोरोना छैन भनेर डिस्चार्ज भैसकेका किशोरमा को*रोना पोजेटिभ देखिएपछी फेरी सन्त्रास फैलियो
रुकुम घटनाबारे संसदमा कड्कीए गगन थापा, संसदमा चल्यो जुहारी, सडकमा मान्छेको भिड (हेर्नुहोस भिडियो)
बिर अस्पताल का#ण्ड रामलखनको ला#स परिवारले बुझे….? पशुपति लगिदै (हेर्नुहोस भिडियो)
होशियार ! धेरै वि*र्य खेर फाल्दा यस्तो हुन्छ.. जानी राखौ.. (62008)
आफ्नो फोक्सो ७२ घण्टामा आफैं यसरी सफा गर्नुहोस्, पढौं र जानकारीको लागी सेयर गरौं… (51021)
सुष्माभन्दा खतरा उनकी भाउजु, खुल्यो नन्द भाउजुको सबै पोल! यसरी लकाए सत्य (हेर्नुहोस भिडियो) (45340)
काठमाडौंमा डेरा गरेर बस्नेहरुको लागी आयो यस्तो खबर ! (44790)
भाग्यमानीले मात्र देख्ने यो दुर्लभ २ मुखे नागलाई छोएर सेयर गरौं बिल्कुलै बेवास्ता नगरौं